प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच किन भइरहेको छ विवाद ? के हो एमसीसी परियोजना ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच किन भइरहेको छ विवाद ? के हो एमसीसी परियोजना ?
वर्णन मिडिया व्रिफिङ
सुरुआतमै प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा छलफल गरिने विषयबारे जानकारी गराएका थिए। दलहरुको छलफल त्यसमै केन्द्रित भएको थियो ।
२०७८ बैशाख ५, आईतवार १७:४३:००
काठमाडाैं । शनिबार प्रधामन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध खनिए । ओली किन सभामुख प्रति रुष्ट छन् ? किन प्रत्येक भेटमा ओली सभामुख विरुद्ध आक्रामक छन् ?
एमाले, कांग्रेस, जसपा, राप्रपालगायतका दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुको उपस्थिति थियो । बैठकलाई माओवादी केन्द्रले बहिष्कार गरेको थियो । एमालेका वरिष्ठ नेताहरु तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पनि बैठकमा सहभागी भएनन्। जसपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तथा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सहभागी भएनन् । सुरुआतमै प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा छलफल गरिने विषयबारे जानकारी गराएका थिए। दलहरुको छलफल त्यसमै केन्द्रित भएको थियो ।
पहिलो, बढ्दो कोरोना महामारीको प्रतिकार्य कसरी गर्ने, यसलाई रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के–कस्ता उपायहरु अवलम्बन कसरी गर्ने। दोस्रो, रिक्त भएका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र केही स्थानीय तहमा गर्ने उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा । तेस्रो, संसद्मा अड्किरहेका केही बिजनेसहरु र पछिल्ला राजनीतिक स्थितिहरुको बारेमा पनि सर्वदलीय बैठकमा छलफल भयो ।
सभामुख अराजक र अनैतिक
सदनदेखि सर्वदलीय बैठकसम्म अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदनका विषयमा सरकारले प्राथामिकतामा राखेको छ । संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका सांसदहरूले एमसीसी सदनको कार्यसूचीमा राख्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् भने सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गरे ।
बालुवाटारमा शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसलाई कार्यसूचीमा नराखेर अनुचित काम गरेको मात्रै बताएनन् एमसीसी अनुमोदनको निम्ति सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग समर्थन मागे । एमसीसीका विषयमा सरकारले समर्थन खोजेका कारण कांग्रेसले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा यो विषय छलफलमा ल्याउन आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको छ ।
सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सहमति खोज्नुअघि यो विषयले सदनमा समेत प्रवेश पाएको थियो । सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले सदनलाई विजनेश नदिएको भनेर प्रचारबाजी गरिएको तर सभामुखले एमसीसीसहितका अन्य प्रस्ताव रोकेको भन्दै यथाशीघ्र सदनमा पेश गर्न माग गरेका थिए ।
राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन सरकारको मरिहत्ते
प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउने गृहकार्य चलिरहेका समयमा एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई सरकारले प्राथामिकतामा राख्दा विभिन्न संशय पैदा भएका छन् । कूटनीतिक मामिलाका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषकहरू दलीय ध्रुवीकरण निम्त्याउँदै सरकारको आयु लम्ब्याउनका निम्ति ओलीले एमसीसीलाई प्राथामिकतामा राखेको टिप्पणी गर्छन् ।कूटनीतिक मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले दलीय ध्रुवीकरण निम्त्याउनका निम्ति र आफ्नो सत्ता संकट टार्नका निम्ति ओलीले यसलाई प्राथामिकता दिएको तर्क गर्छन् । यस्तै राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना अनुमोदन गराउन सफल भएको अवस्थामा सत्ताको आयु लम्ब्याउन सकिने दाउमा ओली रहेका छन् ।
‘यो परियोजनामा भारत र अमेरिका जोडिएको छ । ओली सरकार इन्डो अमेरिकी ध्रुवको हो भने कांग्रेस अमेरिकी ध्रुव हो । जसपा इन्डियन ध्रुवको मानिन्छ । कांग्रेस र जसपाको साथ पाएको अवस्थामा सहजै सम्झौता अनुमोदन हुने र राजनीतिमा ध्रुवीकरण निम्त्याउन सकिने ध्येयका साथ यो प्रस्ताव अहिले ओलीको प्राथामिकतामा छ,’ एक नेताले भने । यो प्रस्तावमा एमालेभित्रै मतऐक्यता भने छैन । एमालेभित्रै माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको समर्थन एमसीसीलाई छैन । एमसीसीको सुरुवातदेखि नै विरोध गर्दै आएका नेता भीम रावल इन्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना अनुमोदन गराएको अवस्थामा ओलीको सत्ता लम्बिने आश्वासन पाएको कारणले सरकारको प्राथामिकतामा परेको आरोप लगाउँछन् ।
सदनबाटै छिनोफानो हुनुपर्छ: सरकार
यो सम्झौताको विषयमा सार्वजनिक रूपमा विरोध भए पनि सकार भने सदनबाटै छिनोफानो हुनुपर्ने पक्षमा छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सम्झौता राष्ट्रको हितमा भएको वा नभएको भन्ने बहस सदनमा हुनुपर्ने र त्यसले नै यसको छिनोफानो गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो प्रस्तावको विषयमा मेरा पनि सहमति र असहमतिका विषय होलान् तर यो प्रस्ताव पास गर्ने वा फेल गर्ने भन्ने अधिकार सदनमा निहीत भएकाले सदनबाटै छिनोफानो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ’पौने दुई वर्षदेखि यो प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । सरकारले दिएको बिजनेस सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी रोक्न मिल्दैन । सदनभित्रै छलफल गरी टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ ।’
यो सम्झौता राष्ट्रहितमा छ वा छैन भन्ने विषयको निर्क्यौल सदनबाटै हुनुपर्ने मत प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बैठकमा राखेका थिए । ’सार्वजनिक रूपमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भएका छन् । प्रस्तावका विषयमा सदनमा छलफल गरौँ । यसलाई पेस गर्ने विषयमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गरौँ र पारितका निम्ति पनि राष्ट्रिय सहमति बनाऔँ,’ सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सरकारले ७ वैशाखमा बस्ने संसद् बैठकमा यसलाई टेबुल गर्ने पक्षमा छ । प्रतिनिधिसभाको विधेयक अधिवेसनमै यसको छिनोफानो लगाउने सरकारी तयारी छ । यो विषयमा कांग्रेससमेत सकारात्मक देखिन्छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहँदाकै बखत यो सम्झौता भएको थियो । ८ असोज २०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यबाहक सीइओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनौट भएको थियो । संसद्को विधेयक शाखामा ३० असार २०७६ मा दर्ता भए पनि संसद्मा यसको प्रक्रिया हालसम्म प्रारम्भ भएको छैन । यसको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन नसक्नुमा सरकारले सभामुखलाई दोषी भने पनि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सभामुखको कुनै दोष नरहेको बताउँछन् । एमसीसी कार्यान्वयनका निम्ति संसद्को बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्त छ  । सम्झौता सदनबाट अनुमोदन भए अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यो रकम विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्मिसन लाइनका साथै सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा खर्च हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।